Hamid Khatib, Siriana Mpakasary, Mandositra Fahafatesana Mba Haka Sary Ny Fiainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2013 3:09 GMT
Taminà tranga iray hafa dia nanatri-maso zera baomba nataon'ny fitondrana i Hamid, nandritra ireo fihetsiketsehana maro natrehany tany Bustan al-Qasr, tanàna iray fantatra loatra amin'ny famadihana koranam-panambadiana ho lasa fihetsiketsehana faobe hitakiana fahalalahana.
Lohatenim-baovao tamin'ny media iraisam-pirenena i Bustan al-Qasr tamin'ny Janoary 2013, rehefa injay nisy lehilahy am-polony nanjavona tsy hita teo amin'ny toerana iray fanaraha-maso napetraky ny fanjakana, ary hita tao amin'ny reniranon'i Queiq taty aoriana, notifirina teo amin'ny lohany daholo ary nofatorana tamin'ny tady plastika daholo avy any an-damosiny ny tànan-dry zareo.
Niantra an'i Hamid ny fahafatesana, saingy tsy toy izany ho an'ireo namany sy mpiara-miasa aminy toa an-dry Molhem Barakat, 18 taona, mpakasary izay maty raha nandrakotra ny ady iray hakàna ny hopitaly iray ao Aleppo tamin'ny 20 Desambra. Mifofotra manohy ny asany i Hamid, ho fanomezam-boninahitra an'i Molhem sy ireo maritiora rehetra namoy ny ainy hisian'ny Syria mendrika kokoa. “Satria tena tsy nisy Syria mendrika nihitsy talohan'ny revolisiona,” hoy izy nanampy. “Tsy misy Syria raha tsy misy tolona ho amin'ny fahalalahana namoizan'ny maro ny ainy.”